Akụkọ - Longhua sonyere na ihe ngosi China Polyurethane nke 18 China
Longhua sonyere na ngosi ngosi Polyurethane China nke 18
Julaị 28-30th ngosi ihe ngosi China China nke 18 na Polyurethane (PU China 2021/ UTECH Asia) na Ngosipụta Mba na Mgbakọ Mgbakọ (Shanghai), na-abịa na njedebe nke ọma.
PU China/UTECH Asia na -enye ndị ọkachamara ihe polyurethane ohere zuru oke iji hụ ọganihu ụwa niile na teknụzụ polyurethane gụnyere ngwaahịa, usoro, igwe na akụrụngwa kachasị ọhụrụ. Ihe omume a sitere na ọtụtụ ndị ọkachamara polyurethane na -anọchite anya ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eji polyurethane eme ihe.
SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD jikere nke ọma, yana teknụzụ dị elu, arụmọrụ dị elu; usoro polyether polyol na polymer polyol ika ngwaahịa ọzọ ghọrọ isi ihe n'otu ụlọ ọrụ. Ọmarịcha nka na izi ezi ziri ezi nke ihe ahụ, adọtala ọtụtụ ndị ọchụnta ego ụlọ na ndị si mba ọzọ gbakọtara ilele na ịtụle ka ha kparịta. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa wetara nsogbu teknụzụ zutere na nhazi ọnọdụ ahụ, mgbe LONGHUA ndị injinia dị elu, ntuziaka teknụzụ na njikarịcha usoro, ọtụtụ afọ ojuju ndị ahịa, saịtị ahụ ruru ebumnuche ịzụrụ ihe.
Ọ bụ njem iwe ihe ubi. Site na ngosi ahụ, ọtụtụ iri ụlọ ọrụ na ndị mmadụ nọgidere na -akpọtụrụ LONGHUA, anyị weghachitekwara ọtụtụ ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọrụ njedebe na ndị na -ere ahịa bara nnukwu uru.
SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD na ụlọ ọrụ Polyurethane n'afọ ndị na-adịbeghị anya emeela mmepe ogologo oge na ihe ịga nke ọma; enwere ụfọdụ ihe nketa ika, mmepe nke ụda. Site na ezigbo ikike ịzụ ahịa, anyị nwere n'ọhịa nke ngwaahịa nkwadebe akụrụngwa siri ike nwere ọnọdụ dị mkpa. Agbanyeghị, mana anyị makwaara na "ụzọ dị anya ị ga -aga. Anyị ga -aga n'ihu ịkwalite sistemụ njikwa, iji mee ka usoro akara LONGHUA dị ngwa, ihu ezi uche dị na ahịa chọrọ, na -eme ka ndị ahịa na ndị enyi nwee ezigbo ọrụ.
Ka anyị zukọta na Ngosipụta Polyurethane China nke 19 n'afọ na -abịa!
Oge ezipụ: Aug-23-2021